1 Ozi gbara ọkpụrụkpụ:
Okwu Jehova+ kwuru banyere Izrel site n’ọnụ Malakaị:
2 “M hụrụ unu n’anya,”+ ka Jehova kwuru.
Unu onwe unu asịwo: “Olee otú i si hụ anyị n’anya?”+
“Ọ̀ bụ na Isọ abụghị nwanne Jekọb?”+ ka Jehova kwuru. “Ma ahụrụ m Jekọb n’anya,+
3 akpọrọ m Isọ+ asị; n’ikpeazụ, m mere ka ugwu ya bụrụ ebe tọgbọrọ n’efu,+ meekwa ka ihe nketa ya bụrụ maka nkịta ndị na-ebi n’ala ịkpa.”+
4 “Ebe ọ bụ na Idọm nọ na-asị, ‘A kụriwo anyị, ma anyị ga-alọghachi wuo ebe ndị ahụ a lara n’iyi,’ nke a bụ ihe Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, ‘Ha onwe ha ga-ewu ya; ma mụ onwe m ga-akwatu ya.+ Ndị mmadụ ga-akpọkwa ha “ókèala ajọ omume,” kpọọkwa ha “ndị Jehova kọchaworo+ ruo mgbe ebighị ebi.”
5 Anya unu ga-ahụ ya, unu ga-asịkwa: “Ka e bulie Jehova elu n’ókèala Izrel dum.”’”+
6 “‘Nwa na-asọpụrụ nna ya;+ onye na-eje ozi na-asọpụkwara nna ya ukwu.+ Ya mere, ọ bụrụ na m bụ nna,+ olee nsọpụrụ a na-enye m?+ Ọ bụrụkwa na m bụ Nna unu Ukwu, olee egwu+ unu na-atụ m?’ ka Jehova nke ụsụụ ndị agha gwara unu ndị nchụàjà, ndị na-eleda aha m anya.+
“‘Unu sịkwara: “Olee otú anyị si leda aha gị anya?”’
7 “‘Ọ bụ site n’iweta achịcha rụrụ arụ n’ebe ịchụàjà m.’+
“‘Unu sịkwara: “Olee otú anyị si mee ka ị ghara ịdị nsọ?”’
“‘Ọ bụ site n’unu ịsị: “Tebụl+ Jehova bụ ihe e kwesịrị ileda anya.”+
8 Mgbe unu na-eweta anụmanụ kpuru ìsì maka ịchụ àjà: “Ọ bụghị ihe ọjọọ.” Mgbe unu na-ewetakwa anụmanụ dara ngwọrọ ma ọ bụ nke na-arịa ọrịa: “Ọ bụghị ihe ọjọọ.”’”+
“Biko, werenụ ya gaa nye gọvanọ unu. Ihe unu ọ̀ ga-adị ya mma, ka ọ̀ ga-eji obiọma nabata unu?” ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru.
9 “Ugbu a, biko, meenụ ka obi Chineke jụrụ,+ ka o wee meere anyị amara.+ Ọ bụ unu ka ihe a si n’aka. Ọ̀ dị onye n’ime unu ọ ga-eji obiọma nabata?” ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru.
10 “Ònyekwa n’ime unu ga-emechi ụzọ?+ Unu agaghịkwa emenye ọkụ n’ebe ịchụàjà—na nkịtị.+ Enweghị m mmasị ọ bụla n’ebe unu nọ,” ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, “enweghịkwa m mmasị n’onyinye inweta ihu ọma nke unu na-eweta.”+
11 “N’ihi na malite n’ebe ọwụwa anyanwụ ruo n’ebe ọdịda ya, aha m ga-adị ukwuu n’etiti mba niile,+ a ga-esurekwa ihe nsure ọkụ n’ebe niile,+ a ga-ewetara aha m onyinye, bụ́ onyinye dị ọcha;+ n’ihi na aha m ga-adị ukwuu n’etiti mba niile,”+ ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru.
12 “Ma unu na-eme ka m ghara ịdị nsọ+ site n’ịsị, ‘Tebụl Jehova rụrụ arụ, mkpụrụ ya, nke bụ́ nri a na-edokwasị na ya, bụkwa ihe e kwesịrị ileda anya.’+
13 Unu sịkwara, ‘Lee! Ike ya agwụla anyị!’+ unu na-emikwara ya ọnụ,” ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru. “Unu ewetawo ihe a pụnatara apụnata na nke dara ngwọrọ nakwa nke na-arịa ọrịa;+ ee, unu ewetawo ya ka ọ bụrụ onyinye. Ọ̀ ga-atọ m ụtọ ịnara ya unu?”+ ka Jehova kwuru.
14 “Onye a bụrụ ọnụ ka onye na-aghọ aghụghọ bụ mgbe o nwere anụ nke ahụ́ dị mma, nke bụ́ oké n’ìgwè anụ ya, ma ya ana-ekwe nkwa, jiri nke ahụ́ na-adịghị mma na-achụrụ Jehova àjà.+ N’ihi na abụ m Eze ukwu,”+ ka Jehova nke ụsụụ ndị agha kwuru, “aha m ga-adịkwa egwu n’etiti mba niile.”+
mailto:?body=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D1011452%26Book%3D39%26Chapter%3D1%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Nọrọ Ebe A Gụọ Baịbụl